अदालतले छाड्यो यी पूर्व सभासद्लाई, मेडिसिटी हस्पिटलको दादागिरी ‘फेल’ !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
अदालतले छाड्यो यी पूर्व सभासद्लाई, मेडिसिटी हस्पिटलको दादागिरी ‘फेल’ !
काठमाडौं – मेडिसिटी हस्पिटलको लापरवाहीले कमजोर बच्चा जन्मिएको भन्दै आफ्नै शिशुलाई अस्पतालमा बेवारिसे छोडेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएका पूर्व सभासद गायत्री साह र उनका श्रीमान राजेश महतो थुनामुक्त भएका छन् ।
ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले साहलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ भने महतोलाई २० हजार धरौटी माग गरिएकोमा धरौटी बुझाएर महतो थुनामुक्त भएका छन् ।
गत बैशाख २२ गते साह र महतोद्वयलाई ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पताल परिसरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
बेवारिसे ढंगले शिशु छोडेको किटानी जाहेरी मेडिसिटी अस्पतालले दिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई अस्पतालबाटै पक्राउ गरेको थियो । एकातिर अस्पतालले लापरवाही गरेर कमजोर बच्चा जन्मिएको र अर्काेतिर अस्पतालले नै उजुरी दिएर आमाबुवा पक्राउ परेपछि आलोचना भएको थियो ।
उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ को उपदफा ९१० अनुसार मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त उपदफा अनुसार नवजात शिशु, बालबालिकालाई आफूले हेरचाह वा स्याहारसम्भार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले परित्याग गर्न वा बेवास्ता गरी छोड्न नहुने उल्लेख छ । त्याग वा बेवास्ता गरेको पाइएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने संहितामा उल्लेख छ ।
अस्पतालको हेलचेक्रयाईंका कारण डाउन सिन्ड्रोम भएको शिशु जन्मिएको दाबी महतो दम्पतीको छ । शिशुलाई बेवास्ता गरेको नभई थप उपचारका लागि अस्पतालमा राखिएको महतोले बताउँदै आएका छन् ।
अदालतको आदेशपछि खुशी व्यक्ति गर्दै महतोले न्याय पाएको बताए । उनले भने, ‘प्रहरीले जबर्जस्ती पक्राउ गरेपनि न्यायालयले न्याय दिएको छ ।’
गायत्री साहले मेडिसिटी अस्पतालमा गत वर्ष फागुन २८ गते बच्चा जन्माएकी थिइन् । बच्चा जन्मिएपछिको रिपोर्टमा अस्पतालले शिशुको स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहेको जनाएको थियो । तर केही दिनपछि अस्पतालले नै भारतमा पठाएको नमूना परीक्षणबाट शिशुमा डाउन सिन्ड्रोम रहेको खुलेको थियो ।
त्यसपछि साह दम्पतीले डा. निरासिंह श्रेष्ठ र उनी कार्यरत मेडिसिटी अस्पतालको गम्भीर लापरबाहीको शिकार आफूहरू भएको भन्दै शिशुको डिस्चार्ज लेटर लिन अस्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले अझैसम्म पनि डिस्चार्ज लेटर लिएका छैनन् । यही विषयलाई लिएर अस्पतालले उनीहरुविरुद्ध उजुरी दिएको थियो । सोही उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
मेडिसिटी अस्पतालकै डा. श्रेष्ठको सल्लाह अनुसार साह दम्पती उनको निजी क्लिनिकमा नियमित गर्भ परीक्षण गर्दै आएका थिए । तीन महिनामा गरिने परीक्षण नगरिदिँदा शिशुमा रहेको क्रिटिकल डाउन सिन्ड्रोम पत्ता नलागेको दाबी उनीहरूको छ ।
अस्पतालले गल्ती ढाकछोप गर्न आफूहरूलाई सिकार बनाएको साह दम्पतीको दाबी छ । अस्पतालले भने यसमा आफ्नो लापरबाही नरहेको दाबी गरेको छ ।